ISolar de Bonito-Indlu yakho eseNtabeni
ISolar de Bonito yindawo yokubuyela intaba kwi-750 m ukuphakama eBonito-Pernambuco.
Sinikezela ngeChalet epholileyo ehlala abantu ukuya kuthi ga kwi-3, enebalcony yombono omhle wokutshona kwelanga. Inegumbi lokulala eliphindwe kabini, ibhedi enye kwigumbi lokuhlala elinendawo yokulala enesinki, isitovu sombane, ifriji kunye nempahla.
Ingaba ikhona iWi-Fi,
Ihlangabezana neemfuno zokufikeleleka kunye negumbi lokuhlambela elilungelelanisiweyo kunye neengcango ezibanzi.
Inika ibhedi kunye nebhafu yelinen
Abanini bahlala kumhlaba omnye.
Ulwazi oluninzi ngezantsi.
I-Solar de Bonito chalet inombono omangalisayo wentlambo apho unokubona isixeko saseBonito. Ukutshona kwelanga kunokubonwa kwi-balcony okanye kuyo nayiphi na indawo yomhlaba.
Ukusa phakathi kwamafu kwaye rhoqo ngaphezu kwawo, kwenza indawo ekhethekileyo, izisa intaba ebandayo eyothusayo kwi-Brazilian Northeast.
I-balcony inesofa encinci, itafile yeglasi enezitulo ezi-4 zokutya kunye ne-cottage ine-hammocks ezi-2.
Inegumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlala elinebhedi enye kunye ne-pantry ene-sink, ifriji, i-cutlery, iipleyiti, iiglasi, isitovu sombane esinezitshisi ezi-2, iipani ezi-3, i-couscous pan, i-pan yokuqhotsa, i-blender kunye nomenzi wekofu yombane. .
Inegumbi lokuhlambela elikhulu elinokufikeleleka ngokupheleleyo ngocango olutyibilikayo, iisinki ezimbini kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, imivalo yokhuseleko kunye nendlu yangasese elungelelanisiweyo.
Ibonelela ngezixhobo ezinje: ilaphu lokutshona, itawuli yesitya, isefu kunye nesipontshi se-sink, ilaphu eliphantsi, isibulali ntsholongwane.
IChalet ibonelela ngezinto zokulala - amashiti alastiki oomatrasi, amashiti okugquma, imiqamelo, iingubo okanye iduvet, imiqamelo kunye neesuti zokuhlambela (iitawuli zokuhlamba nobuso), kunye nesepha kunye nephepha langasese.
Ukujikeleza i-chalet kunokwenzeka ukuba uhambe kwaye ufumane iindawo zokucamngca, ukucamngca ngendalo kunye nokudlala nabantwana. Indawo yonke ibiyelwe. Imoto ipake emnyango weChalet.
Sikwindawo yasemaphandleni yaseBonito, ilungele abo bafuna ukuzola kwaye baphume kukuphithizela kwesixeko. Simi malunga ne-4km ukusuka kumbindi weBonito kwaye malunga ne-7km kude nengxangxasi yokuqala etyelelwayo ngaphakathi kwesekethe yengxangxasi yaseBonito. Kwi-Chalet yethu, kunye nawo wonke umhlaba, yinxalenye ye-Municipal Atlantic Forest Reserve ebizwa ngokuba yiMucuri/Himalaia. Kukho abahlali basemaphandleni kufutshane nepropathi yethu.
Emva kokubhuka, kunokwenzeka ukuseka unxibelelwano ngeselfowuni okanye nangomntu. Abanini be-cottage bahlala kwenye indlu kumhlaba ofanayo kunye ne-cottage. Okwangoku asisebenzi ngenkonzo yesidlo sakusasa esongezelelweyo.